Aya ndiwo mabudiro akaita iPhone kubva 1 kusvika 11 - Kuenzanisa kweese iPhone | IPhone nhau
Aya ndiwo mabudiro akaita iPhone kubva pa1 kusvika pa11
Kubva kuvhurwa kweyekutanga iPhone muna 2007, Apple yakatanga chizvarwa chitsva che iPhone mumakore akateedzana, kusvika nhasi iyo iPhone 11. Kana iwe uchida kuziva sei iyo iPhone renji yakachinja kubva kuchizvarwa chekutanga kusvika kwekupedzisira ndinokukoka kuti uenderere mberi nekuverenga.
Asi kutanga, nhoroondo diki haina kumbokuvadza, nhoroondo diki kwatinokuudza zvayaive yekutanga isina tambo foni iyo yakagadzirwa uye yaive yekutanga mbozhanhare kutengeswa zviri pamutemo pasirese.
Foni yekutanga isina tambo, inogona kunzi nhare (kunyangwe hazvo vhoriyamu yacho ingave tsananguro isiriyo) kwete chigadzirwa chazvino. Foni yekutanga kunzi isina waya akaberekwa mukutanga kwema20 muzana rekupedzisira kubva mumaoko aWW Macfarlane.
Mamwe masosi anoti ndiAlexander Graham Bell, muvambi werunhare, uyo aiyedza mukupera kwema1800, asi izvo yakasiya iyo pfungwa isingawani inoshanda. Nhare mbozha dzisati dzave kukurumbira mumusika, iyo isina tambo foni yakadzika iyo yakatipa isu kunzwa kwakafanana chaizvo asi kwakaganhurirwa kunharaunda kune kwaive kufukidzwa.
Nhare dzisina tambo hachisi chinhu chinongova cheredhiyo chinobatanidza zvisina waya kune base, iyo inosanganisirwa netiweki yenhare. Iyo Siemens kambani yakanangana nekuvandudzwa kwefoni dzisina tambo muna 1938, chiitiko chakakanganiswa kwenguva pfupi neHondo Yenyika II, ichive icho Ericofon yekutanga isina tambo foni.
Kana tikataura nezve nharembozha, tinofanirwa kutaura nezve Motorola, uyo muna 1973 yakaunza nharembozha yekutanga (izvi zvakakosha) kunyangwe yanga isingaitengeswe kusvika makore makumi masere. Nekudaro, iyo netiweki inodiwa kuti nhare mbozha dzekutanga dzishande dzakagadzirwa muJapan muna 80, ichisvika kunyika dzinoverengeka dzeEurope makore akati gare gare.
Mumakore makumi masere, nharembozha yaive analog (1G). Chizvarwa chechipiri (2G) chakasvika muna1991 uye chakava chiyero cheGSM. Muna 2001 kwakauya chizvarwa chechitatu (3G). Muna 2009, kuvhurwa kwema 4G network kwakatanga kuumbika, kutakura zvinowanda zvakajairika zvemultimedia. Kubva 2018 tiri kutaura nezvechizvarwa chechishanu (5G) chizvarwa chitsva chinotarisa pakuderedza nguva yekupindura mukuwedzera kunatsiridza kumhanya kwekufambisa zvakanyanya.
1 Nhoroondo yeiyo iPhone
1.9 iPhone 6 / iPhone 6 Uyezve
1.10 iPhone 6s / iPhone 6s Uyezve
1.12 iPhone 7 / iPhone 7 Uyezve
1.13 iPhone 8 / iPhone 8 Uyezve / iPhone X
Nhoroondo yeiyo iPhone
Nekutanga kweiyo iPhone yekutanga muna 2007, zvese zvakachinja. Kunyange chiri chokwadi kuti kusvika parizvino paive nemablackberries nemaPDA Inotungamirwa neWindows Mobile, iyo iPhone inobvumidza kubhurawuza kweInternet, mafoni, mameseji, email, kutamba mimhanzi, nezvimwewo kuti zvibatanidzwe muchigadzirwa chimwe chete.
Iyo yekutanga iPhone haina kusanganisira chero zita rekupedzisira sekunge mamwe ma terminals ayo Apple akatanga pamusika kubva ipapo ave nawo. Iyi terminal yakaunzwa zviri pamutemo muna Ndira 2007, ichirova musika munaJune wegore rimwe chetero.
Iyo yekutanga iPhone yaive ne 3,5 inch screen LCD ine 320 x 480 resolution, muvara mutema uye inokwana 4, 8 uye 16 GB yekuchengetera (maviri ekupedzisira akasvika muna2008). Yakasvika pamusika neIOS 1.0 uye yakagadziridzwa kuita iOS 3.1.3. Yaitarisirwa ne Samsung processor ARM 1176JZ (F) -SA 620 MHz, 128 MB RAM uye 32-bit kuvaka.
Chizvarwa chechipiri cheiyo iPhone chaive iyo iPhone 3G, modhi yakapihwa munaJune 2008, ichisvika mwedzi gare gare pamusika. Yaiwanikwa nemavara matema nemachena, yakabatanidza 3,5-inch skrini ine 320 x 480 LCD resolution uye ine maviri ekuchengetedza shanduro: 8 uye 16 GB (iyo chena modhi yaingowanikwa mune ino chinzvimbo).
Iyo processor yakashandiswa mu iPhone 3G yaive zvakafanana nechizvarwa chekutanga che iPhone, iyo Samsung ARM 1176JZ (F) -S pa620 MHz, 128 MB ye RAM uye 32-bit kuvaka. Yakasvika pamusika neIOS 2.0 uye yakagadziridzwa kuenda kuIOS 4.2.1
Muna Chikumi 2009 Apple yakaunza iyo iPhone 3GS, modhi yakaramba ichishandisa iyo imwechete skrini uye resolution seiyo yekutanga iPhone. Musiyano mukuru neiyo iPhone 3G, tinoiwana mune iyi modhi inosanganisirwa a mu-kamera autofocus system uye processor yakabata chishandiso.
Yakauya kumusika mune nhema uye chena mavara uye kugona kwe8, 16 uye 32 GB. Screen yacho yaive 3,5 inches ne 320 x 480 resolution LCD mhando, iyo processor yaive Samsung ARM Cortex-A8 pa833 MHz, 256 MB ye RAM uye 32-bit dhizaini. Yakasvika pamusika neIOS 3.0 uye yakagadziridzwa kuita iOS 6.1.6.
Iyo iPhone 4 yakaunzwa zviri pamutemo munaJune 2010, yakasvika pamusika nemavara matema nemachena uye iine 8, 16 uye 32 GB yekuchengetedza. Ratidza tekinoroji yakashanduka kubva pakuve LCD kuoma kusvika kunzi Retina Display, Iyo resolution inosvika 960 x 640 pixels ine saizi saizi ye 3,5 inches.
Iyo iPhone 4 yaitarisirwa ne yekutanga processor yakagadzirwa neApple ine ARM yekuvakisa, processor yakamhanya pa800 MHz uye yaiperekedzwa ne512 MB ye RAM uye 32-bit mapurani. Yakauya neIOS 4.0 uye yakagadziridzwa kuIOS 7.1.2.
Iyo iPhone 4s yakaunzwa zviri pamutemo muna Ndira 2011, iine masimba e8, 16 uye 32 GB uye nhema uye chena mavara. Iyo skrini yaive Retina inoratidzira ine 3,5 inches uye 960 x 640 resolution, iri yekutanga iPhone mu kutora AirPlay tekinoroji uye iye chaiye mubatsiri Siri.
Iyo processor yaibata timu yaive iyo A5, processor yaimhanya pa800 MHz, yakabatanidzwa 2 cores, 512 MB ye RAM uye 32-bit mapurani. Yakasvika pamusika neIOS 5.0 uye yakagadziridzwa kuita iOS 9.3.6.
Iyo iPhone 5 yakaziviswa zviri pamutemo munaGunyana 2012 uye yaive iyo kutanga kukuru kugadziridza kusvika muiyo iPhone renji, kuenda kubva ku3,5-inch screen kune iyo 4-inch screen ine resolution ye1136 x 640. Ichi ndicho chekutanga terminal chakatora iyo Kubatanidza magetsi Apple, ichisiya parutivi 30-pini yekubatanidza yezvizvarwa zvakapfuura.
Yaitarisirwa ne 6-musimboti Apple A2 processor kumhanya kwe1.3 GHz, uye yaiperekedzwa ne1 GB ye RAM uye 32-bit mapurani. Yakasvika pamusika neIOS 6 uye yakagadziridzwa kuIOS 10.3.4.
MunaGunyana 2013, Apple yakaedza kusvika kune yakakura nhamba yevashandisi yakaunza iyo iPhone 5c, iyo yakanga isiri chinhu kunze kweiyo iPhone 5 yakagadzirwa nezvinhu zvepurasitiki uye inowanikwa mune chena, pink, yero, bhuruu uye girini mavara. Mabhenefiti avakatipa akafanana neiyo iPhone 5 asi nemutengo wakaderera pane iyo iPhone 5s, chinongedzo chakapihwa pamwe chete neiyo iPhone 5c.
Pamwe chete neiyo iPhone 5c munaGunyana 2013, Apple yakaunza iyo iPhone 5s, chinongedzo chakabatanidza 4-inch skrini ine 1136 x 640 resolution, yaitarisirwa ne Apple A7 1,3 GHz 64-bit processor, Apple M7 coprocessor (kuva iyo yekutanga iPhone kuiisa) uye 1 GB ye RAM. Yakasvika pamusika neIOS 7.0 uye yakagadziridzwa kuenda kuIOS 12.4.8.
Yaiwanikwa mu16, 32 uye 64 GB shanduro uye mune space grey, goridhe uye sirivheri. Nekuvhurwa kweiyo iPhone 5s Apple yakatanga kutaura zvakanaka kune maficha akagadzirirwa 32-bit processor. Iyo iPhone 5s yaive iyo yekutanga Apple smartphone kuisa Inobata ID, chigunwe cheminwe yekudzivirira kuchengetedza kupinda kwechigadzirwa.
iPhone 6 / iPhone 6 Uyezve
Nekuvhurwa kweiyo iPhone 6 muna 2014, Apple zvakare yakatevera maitiro emusika, a chimiro chakanongedzera kune makuru masikirini. Mhedzisiro yacho yaive iPhone 6 ine 4,7-inch skrini uye iyo iPhone 6 Plus, iyo skrini yakasvika 5,5 inches.
Iyi nyowani nyowani yakasvika pamusika mune space grey, sirivheri uye goridhe ine ekuchengetera mavhezheni e16, 64 uye 128 GB. Mukati, tinowana iyo 8-musimboti Apple A2 processor pa1,4 GHz ine M8 koprocessor ine 1 GB ye RAM.
Ose ari maviri iPhone 6 uye iPhone 6 Plus yakarova pamusika paIOS 8 uye yakagadziridzwa kuita iOS 12.4.8.
iPhone 6s / iPhone 6s Uyezve
Muna 2015 iyo iPhone 6s uye iPhone 6s Plus yakaunzwa. Matemu maviri akarova musika munzvimbo yegrey, avocado, goridhe uye akamuka goridhe muna 16, 32, 64 uye 128 GB ekuchengetera mavhezheni. Uyu muenzaniso yakaburitsa Force Touch tekinoroji, tekinoroji yaikubvumidza iwe kudzvanya pachiratidziro kuti uwane menyu yesarudzo.
Mukati, tinowana iyo Apple A9, 2-musimboti processor ine 64-bit dhizaini, 2 cores uye achiperekedzwa neM9 koprocessor. Ndangariro dzinosvika 2 GB uye dzakasvika kumusika neIOS 9. Nanhasi, nekuvhurwa kweIOS 14, ino terminal inoramba ichitambira zvigadziriso.
Iyo iPhone SE inogona kutariswa kumwe kuyedza neApple kuvhura Bhajeti iPhone. Iyi iPhone yakadzokera ku-4-inch skrini yeiyo iPhone 4, yaiwanika mune space grey, goridhe, sirivheri uye yakasimuka goridhe uye muna 16, 32, 64 uye 128 GB ekuchengetera mavhezheni.
Yakaunzwa munaKurume 2016, saka processor yayo yaive zvakafanana izvo zvataigona kuwana muiyo iPhone 6s uye 6s Uyezve. Yakarova pamusika neIOS 9 uye nanhasi ichiri kugamuchira zvigadziriso kubva kuApple.
iPhone 7 / iPhone 7 Uyezve
Iyo iPhone 7 yakavhurwa zviri pamutemo munaGunyana 2016, padivi peiyo Plus modhi. Pakati pezvinhu zvitsva zvine chekuita nechizvarwa chakapfuura isu tinowana kamera mbiri pane iyo Plus modhi kutora mifananidzo yevanhu vane mamiriro ekunze kunze kwekutarisa uye pane bhatani repanyama reTouch ID, iyo isisiri bhatani repanyama kuti upe mhinduro haptic pakubata.
Mhando mbiri idzi dzakarova pamusika ne Apple A10 Fusion 64-bit 4-musimboti inoperekedzwa neM10 koprocessor uye 2 GB ye RAM. Yakavhurwa paIOS 10 kumusika uye nhasi inoenderera ichivandudzwa, iine iOS 14 iri yazvino vhezheni iriko nhasi.
iPhone 8 / iPhone 8 Uyezve / iPhone X
Iyo iPhone 8, yakaunzwa munaGunyana 2017, yakauya nenhau shoma kwazvo kana ichienzaniswa nechizvarwa chakapfuuraZvirinani maererano neanoshanda, nekuti mukati tinowana iyo Apple A11 Bionic 2.4 Ghz processor ine 64-bit architecture, 6 cores uye inoperekedzwa neA11 koprocessor uye 2 GB ye RAM. Mhando mbiri idzi dzakasvika neIOS 11 pamusika. Yaive yekutengesa mu spacial grey, avocado, goridhe uye (PRODUCT) Tsvuku mushanduro ine 64 uye 128 GB yekuchengetedza.
Pamwe chete neiyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus, iyo iPhone X yakaunzwa, yakaunzwa munaGunyana 2017 asi yakarova pamusika mwedzi miviri gare gare, Apple yekutanga smartphone isina Kubata ID uye pasina kana chero mafuremu pachiratidziri. Iyo yekutsiva yeTouch ID yaive Chiso ID, iyo yekumeso yekuona system inowanikwa kumusoro kwechiso.
Iyo skrini yakasvika 5,8 inches ine resolution ye2436 x 1125 uye yaive yekutanga kushandisa OLED tekinoroji. Iyo processor yakashandiswa neApple yaive yakafanana neiyo iPhone 8, iyo Apple A11 Bionic ichiperekedzwa neM11 koprocessor, asi kusiyana neiyo iPhone 8 uye 8 Plus, yaiperekedzwa ne3 GB ye RAM.
Iyi modhi yakasvika pamusika mune sirivheri uye nzvimbo grey uye muna 62 uye 256 GB ekuchengetera mavhezheni. Iyo yose iPhone renji iyo Apple yakatanga muna 2017 rova musika neIOS 11 uye nanhasi vanoenderera mberi vachigamuchira matsva.
Iyo iPhone XR yaive bheji nyowani yaApple pamusika iine zviwanikwa zvishoma zvehupfumi. Ino nguva yakarova mbambo pamusoro uye nekukurumidza iyo iPhone XR yakatanga pamusika muna Gumiguru 2018 akava mutengesi. Iyo skrini ye iPhone XR yaive 6.1 inches ne 1792 x 828 resolution uye yaive yerudzi rweLCD (kwete LED sezvaive iyo iPhone X).
Iyi terminal yakasvika pamusika neyero, chena, coral, chena uye bhuruu kuwedzera kune PRODUCT (RED) uye iine 64, 128 uye 256 GB yekuchengetedza. Mukati, tinowana iyo Apple A12 Bionic, 6 GHz 2.5-core processor uye inoperekedzwa neM12 koprocessor uye 3 GB ye RAM.
Mhedzisiro yepamusoro yakataurwa neApple munaGunyana 2018 yaive iyo iPhone XS uye iyo iPhone XS Max, maTerminal maviri akauya kuzotsiva zvese zviri zviviri iPhone 8 uye iPhone 8 Plus. Matemu ese ari maviri anobatanidza a 5,8-inch OLED-mhando inoratidzira paXS uye 6,5-inch pane iyo XS Max.
Panyaya yesimba, iyo iPhone XS uye iPhone XS Max yakasvika pamusika neA12 Bionic processor, processor imwechete iyo yakawanikwawo muiyo iPhone XR, asi kusiyana neiyi, iyo inofambidzana ne4 GB ye RAM, yeiyo 3 yeiyo XR modhi. Ose maviri mamodheru akatungamirwawo neM12 koprocessor, ivo vakarova pamusika mune 64, 256 uye 512 GB vhezheni uye mune space grey, goridhe nesirivheri.
Iyo yose iPhone renji yakataurwa neApple muna 2018 rova musika neIOS 12 uye nanhasi vanoenderera mberi vachigamuchira matsva.
Yakaunzwa kumusika munaGunyana 2019, iyo iPhone 11 yakarova pamusika se mutsivi wepanyama kune iyo iPhone XR, asi pamwe nekuvandudza kumwe chete kwatingawana mune hama dzayo dzakura, iyo Pro vhezheni yeiyo iPhone 11.
Iyo iPhone 11 yakaramba ichishandisa skrini ine tekinoroji yeLCD, neApple ichichengetedza tekinoroji yeOLED yezvinyorwa zvePro. iyo yakatipa iyo yakafanana resolution seiyo iPhone XR, yakasvika pamusika muPREDCT (RED) ruvara, yero, chena, girini, nhema uye bhuruu.
Iyo iPhone 11 Pro renji, yaive yekutanga yeiyo iPhone renji mukati wedzera wechitatu kamera module kumashure, yakakura-kona modhi iyo inoshandiswawo seye telephoto lens. Saizi rekuyera kweese ari maviri iPhone 11 Pro uye iyo iPhone 11 Pro Max zvakaenzana izvo zvataigona kuwana muiyo iPhone XS uye XS Max: 5,8 uye 6,5 inches zvakateedzana.
Mukati meiyo yakazara iPhone 11 renji, tinowana processor A13 Bionic, 64-bit 2.66 GHz 6-musimboti processor inoperekedzwa neM13 koprocessor uye 4 GB ye RAM. Iyo Pro renji yakasvika pamusika mune shanduro dze64, 256 uye 512 GB yekuchengetedza uye mune nzvimbo grey, sirivheri, goridhe uye pakati pehusiku girini.
Iyo yakazara iPhone 11 renji rova musika neIOS 13 uye nanhasi vanoenderera mberi vachigamuchira matsva.
Muna Kubvumbi 2020, Apple yakatanga chizvarwa chechipiri cheiyo iPhone SE, chizvarwa chechipiri icho chakasiyana neyekutanga, iyo skrini yaive 4 inches, iyi yakakura kusvika 4,7 inches. Iyo dhizaini yakafanana iyo yatinogona kuwana muiyo iPhone 8, kusanganisira iyo yekubata ID ine haptic mhinduro kune iyo inobata uye kwete bhatani repanyama senge iyo iPhone 6, 6s uye 7.
Mukati, tinowana iyo A13 Bionic processor, yakafanana iyo yatinowana muiyo iPhone 11 renji, 64-bit, ichiperekedzwa ne6 cores, iyo M13 koprocessor uye 3 GB ye RAM. Yakauya kumusika neIOS 13.4.1 uye nanhasi inoramba ichivandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Aya ndiwo mabudiro akaita iPhone kubva pa1 kusvika pa11
Ndangariro yeIphone 4S yaive 16, 32 kana 64 (ndichine imwe 64Gb imwe)
Tricks yekuvandudza hupenyu hwebhatiri muIOS 14
Zviito zviviri zvinokurumidza kumisa kamera pane yako iPhone